Izifanekiso Zawo Wonke Umlayezo Wombhalo Ongazidinga Ebhizinisini Lakho | Martech Zone
Kufana nenkinobho elula yosuku lwanamuhla. Ngaphandle kokuthi yenza konke igajethi yehhovisi lasendulo ibingakwazi.
Ukuthumela imiyalezo cishe kuyindlela elula, eqondile nephumelelayo yokufeza cishe noma yini ebhizinisini namuhla. Ababhali bakwaForbes bashayela ukuthengisa ngemiyalezo ebhaliwe umngcele olandelayo. Futhi yiyona ongafuni ukuyiphuthelwa ngoba ukubaluleka kweselula kumhlaba wokumaketha wedijithali wanamuhla kubaluleke kakhulu.
Izifundo zibonisa ukuthi ama-63% wabasebenzisi be-Smartphone bagcina amagajethi abo enesandla ngama-93% esikhathi sokuvuka kwabo. Futhi I-90% yesikhathi, umuntu uzofunda umbhalo kungakapheli nemizuzu emithathu ewutholile
Izibonelo Zokumaketha Komlayezo Wombhalo
Ukukhetha ukusebenzisa la maqiniso ngomkhankaso osebenzayo wombhalo wombhalo kuyibhizinisi elihlakaniphile.
Kungenzeka ukuthi uke wabona izibonelo eziningi zezinkampani zangempela ezisebenzisa ukumaketha kwe-SMS ohambweni olulodwa oluya enxanxatheleni yezitolo ngaphandle kokukuqaphela lokho. Njengoba isebenzela iningi lamabhizinisi, ikhona yonke into kusuka kubathengisi bezingubo kanye nezitolo zamakhandlela kuya ezitolo zekhofi kanye nezinsiza zamaselula.
UPolo Ralph Lauren ubeka ukumaketha komlayezo wombhalo ezenzweni nge okokuqala ukwazi indlela. Amakhasimende abhalisela i- IPolo Ekuhambeni okunikezwayo okukhethekile kungakhetha ukungena mayelana nokuthengisa nokufika okusha.
Kungenzeka ukuthi inxanxathela yezitolo uqobo isebenzise ukumaketha komlayezo wombhalo ukuxhumana nokunikezwa okukhethekile okufanayo futhi yazise amakhasimende ngemicimbi nokuthengisa. IMayfair Mall eMilwaukee, eWis. yamukela izivakashi enxanxatheleni yezitolo nakuwebhusayithi yayo ngokukhuthaza Joyina iklabhu ukufunda nganoma yini kusuka kuzaphulelo zamalungu kuphela kuya ekuvulekeni kwesitolo esisha kanye nemikhuba yakamuva.
Izifanekiso Zesidingo Sebhizinisi ngasinye
Okwamanje, a ucwaningo lwamuva olwenziwe yi-The Alternative Board lithole ukuthi amaphesenti ayi-19 osomabhizinisi abancane basebenza amahora angaphezu kwama-60 ngesonto, futhi munye kuphela kubaninimabhizinisi abancane abasebenza ngaphansi kwesonto elijwayelekile lamahora angama-40.
Ebhizinisini, isikhathi sibalulekile. Akungabazeki ngalokho. Ngakho-ke kuthiwani uma ngaso sonke isikhathi uma unquma ukuqala umkhankaso omusha wokuphromotha, uthumele isikhumbuzi se-aphoyintimenti noma wazise abasebenzi bakho ngomhlangano, bekukhona isifanekiso salokho?
Kungenzeka ube nazo zonke izifanekiso ezidingekayo, ezigcinwe ngobunono endaweni eyodwa kutholakale kalula. Umqondo ukuthi bekungadingeki ukuthi uzenzele umqhafazo ngokwakho, kepha esikhundleni salokho ungachitha leso sikhathi kulokho okwenza kahle kakhulu: ukwakha ibhizinisi lakho.
Ithimba le-TextMagic, inkampani enama-SMS amaningi, likwenzele wonke umsebenzi, linikezela ngayo yonke ithempulethi yomlayezo wombhalo ongayidinga ebhizinisini lakho nayo yonke imininingwane ebalulekile lapha:
Isibonelo, umlayezo wombhalo osebenzayo kufanele ubandakanye ukubizelwa esenzweni, igama lomthumeli nenombolo yocingo kanye nesixhumanisi esifushane esiya kuwebhusayithi yomthumeli (uma kunesidingo).
Amathiphu ezinye izinhlobo zemikhankaso ye-SMS
Ngaphandle kwalezi zimiso eziyisisekelo, nakhu lokho wonke umnikazi webhizinisi adinga ukukwazi ngezinhlobo eziningana zemikhankaso ye-SMS:
I-SMS Yokumaketha neyokukhuthaza - Imiyalezo ebhaliwe esetshenziselwa ukumaketha nokuphromotha kufanele ibambe ngokwanele ukuthi bobabili babizele umemukeli esenzweni ngenkathi ngasikhathi sinye bedala umuzwa wokuphuthuma. Lawa ngamathuluzi asebenzayo wokuxhumana nezinto ezifana nokuthenga, thola ukudayiswa okukodwa kanye nokugcina amakhasimende aziwe ngezipesheli zasemini namakhuphoni, imicimbi ekhethekile noma izinguquko ezikhathini zokuvula noma zokuvala zebhizinisi lakho.
Izikhumbuzi Zokuqokwa - Isikhumbuzi esisebenzayo sokuqokwa kufanele sifake usuku nesikhathi sokuqokwa, indawo, igama lakho (noma igama lenkampani) nenombolo yakho yocingo. Lokhu kusiza kakhulu kuma-salon ezinwele, odokotela bamazinyo, odokotela, amabhange, kanye nanoma yiliphi elinye ibhizinisi elenzelwa ukuqokwa.
Izaziso Nezixwayiso ze-SMS - Ukuzichaza okuhle, izaziso nezixwayiso kufanele zifake imininingwane efana nekheli lokulethwa, isikhathi esilinganisiwe sokufika, igama lenkampani, nenombolo yocingo. Le milayezo ilusizo kakhulu emabhange, nokwazisa amakhasimende ngolwazi olubalulekile lwe-akhawunti kanye nezaziso zokushintsha imihlangano.
Ukuqinisekiswa kwe-SMS - Kuhle kulabo abahamba njalo, ukuqinisekiswa kwe-SMS kufanele kufake into noma i-ID yokubhuka, igama lenkampani, isixhumanisi esifushane esiya kuwebhusayithi yenkampani, nomyalezo wokubonga. Lokhu kusetshenziselwa njalo izikhumbuzi zendiza, izinguquko ezikhathini zendiza, ukubhuka kwamahhotela, kanye nokuqinisekiswa kokukhokha.
Uma kukhulunywa ngokwenza okuthile okulula ebhizinisini lakho, into elula ongayenza ukuchofoza thumela.
Ukuthumela imiyalezo cishe kuyindlela elula, eqondile nephumelelayo yokufeza cishe noma yini ebhizinisini namuhla.
Futhi ochwepheshe ku UmbhaloMagic ufuna ukusiza ukuyenza ithuluzi olisebenzisela ibhizinisi lakho, ukuze ukwazi ukugxila kokukwenza kangcono kakhulu. Le nkampani inikeza isilingo samahhala uma kwenzeka ungathanda ukuqala ukuthumela imiyalezo ngobuningi.
Tags: Ukumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukumaketha amaselulapoloipolo ekuhambenipolo ralph laurenama-sms wokuphromothaimiyalezo yokukhuthazasmartphoneSMSizexwayiso ze-smsizaziso ze-smsiklabhu yombhaloizexwayiso zomlayezo wombhaloizaziso zomlayezo wombhaloizifanekiso zemiyalezo ebhaliweimiyalezoizikhumbuzo zemiyalezoizikhumbuzo zombhaloumbhalo
U-Anastasia Sviridenko ungumphathi wokumaketha kokuqukethwe ku- UmbhaloMagic, isixazululo se-in-one ngobuningi se-SMS sebhizinisi. I-TextMagic iyinsizakalo enikeza ithuba lokuthi amabhizinisi amancane namakhulu enze imikhankaso yokukhangisa nge-SMS, athumele izaziso, izexwayiso, kanye nokuqinisekisa.
Aug 16, 2017 ku-5: 23 AM
Siyabonga ngokwabelana ngolwazi olunjalo oluwusizo. Kuyiqiniso ukuthi yonke imiyalezo inefomethi eyingqayizivele yokumaketha kwe-SMS njengemilayezo yokuqinisekisa inezifanekiso ezihlukile ezihlobene nezinye izinsizakalo zombhalo.